Ny vovoka Lorcaserin (Belviq) (616202-92-7) hplc≥98% | AOSraw Fat Loss
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / Vovoka Lorcaserin (Belviq)
Rating: SKU: 616202-92-7. Sokajy: Vokatry ny vinaingitra
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mamorona sy ny famokarana maimaim-poana avy amin'ny gram amin'ny baoritra varotra Lorcaserin (Belviq) (616202-92-7), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Ny famokarana zava-mahadomelina mahomby sy azo antoka dia fahavinirana. Ny fanandramana tamin'ny lasa dia misy tsiran-kevitra maromaro toy ny fahavoan'ny fo. Soa ihany, ny fianarana vaovao dia milaza fa ny lolcaserin-lany fanafody dia afaka manampy anao handanilany ny lanjany mihoatra ny tsy fananana ny fahasalaman'ny fo. Lorcaserin dia fanafody mahagaga fanosihosena, izay nankatoavin'ny FDA tamin'ny 2012. Fa inona no atao hoe lorcaserin? Eny ary, etsy ambany ny fanoritsoritana lalina momba ny zava-mahadomelina, ny rafitra fiasany sy ny fananany, ampiasaina, ny dosage, ny fehezan-dalàna, ary ny maro hafa.
Lahatsary vovoka Lorcaserin (Belviq)
I.Lorcaserin (Belviq) fototra karazana:
Name: Lozisiana (Belviq)
Formula Molecular: C11H14ClN
Molekular lanja: 195.692
Color: Fotsy amin'ny fotsy tsy fotsy
Ity ambany ity ny rafitry ny chimique of lorcaserin amin'ny constitution 3-D.
Fananana simika an'ny Lorcaserin (belviq) (CAS 616202-92-7)
Ity ambany ity dia ny fambolena simika Lorcaserin (belviq) voafintina; naseho teo amin'ny latabatra etsy ambany izy ireo raha jerena vetivety.
Toeran'ny mpitsoa-ponenana atokana 1
Hevitra Atomin'ny Heavy 13
Exact Mass 195.081 g / mol
Topolojaratra Polarika 12 A ^ 2
Toe-potoana mitodika amin'ny teboka 0
Fepetra takiana amin'ny rano fisotro 1
Molecular Weight 195.69 g / mol
Famaritana tsotra momba ny poezia HCC Lorcaserin
Lorcaserin (Belviq) dia pilina mpanakana ny fahazotoan-komana namboarin'ny Arena Pharmaceuticals. Izy io dia an'ny kilasy fanafody antsoina hoe agonists mpandray serotonin. Natao hanampiana anao hahatsapa ho voky io rehefa avy nihinana sakafo kely ianao. Mampihena ny fahazotoan-komana amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny 5-HT2C Ireo mpitsabo, izay karazana serotonin-receptors ao amin'ny faritra misy ny ati-doha (hypothalamus) izay mifehy ny filana. Rehefa mampiseho ny vatanao izy ireo mba hahatsapa feno, dia mihinan-kanina kely ianao, ka lasa tsy dia lany intsony amin'ny farany.
Belviq, izay manana ny anarany simika dia (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3- benzazepine hydrochloride hemihydrate, dia natao halefa am-bava. Ny lanjany molekule dia ny 241.16 g / mol, ary ny formula formula dia C11H15Cl2N • 0.5H2O. Ny rijan-kery ara-drafitra dia manaraka:
Ny solubility ny Lorcaserin hydrochloride hemihydrate amin'ny rano dia avo kokoa noho ny 400 mg / mL. Ny takelaka Belviq dia misy 10.4 miligraman'ny lorcaserin hydrochloride hemihydrate kristaly (vovoka fotsy ka hatramin'ny fotsy fotsy), izay mitovy amin'ny 10.0 miligramy lorcaserin hydrochloride. Izy io koa dia misy akora hafa, ao anatin'izany ny magnesium stearate NF, talc USP, FD & C Blue # 2 aluminium farihy, titanium dioxide USP, polyethylene glycol NF, polyvinyl alcohol USP, colloidal silicon dioxide NF, croscarmellose sodium NF, silicified microcrystalline cellulose and hydroxypropyl cellulose NF.
Ny hetsiky ny mpikatroka mivady
Araka ny fepetra fitarihana amin'ny fitantanana ny sakafo sy ny fitsaboana (2007), i Lorcaserin dia afaka manampy ny olon-dehibe hahatratra ny fahavoazana ara-pahasalamana mahomby. Io fitsaboana lozan-dite io dia lazaina fa miasa tsara rehefa miara-miasa amin'ny fikarakarana ara-batana sy ny fihinanana kalôria. Afaka manampy be tokoa amin'ny fitantanana maivana, indrindra amin'ny olona izay be loatra (farafahakeliny 27 kg / m2), na ny fiterahana (BMI farafaharatsiny30 kg / m2). Io fanafody io koa dia afaka manampy ny olona iray na maromaro mifandray amin'ny lanjany, toy ny karazana 2 diabetes, dyslipidemia, na hypertension.
Ny lasam-panafody dia karazana fanaingoana fanaingon-tsavoka manara-penitra izay manavintavona ho 5-HT2C Ny agonista mpandray feo ao amin'ny hypothalamus dia mifototra amin'ny fifantenana fifindran-toerana amin'ny fifandraisana 15 heny amin'ny 5-HT2C mpanolo-tsaina noho ny 5-HT2A ary ny fikolokoloana 100 fotoana fohy kokoa ho an'ny selektivita 5-HT2C ireo mpanolo-tsaina noho ny an'ny 5-HT2B.
Ireo mpandray 5-HT2C dia saika ao amin'ny ati-dohan'ny olombelona ihany no misy azy ary hita ao amin'ny thalamus, hypothalamus, cortex, hippocampus, choroid plexus, cerebellum, ary amygdala. Ny fanentanana ireo mpandray 5-HT2C ao amin'ny hypothalamus dia mampihetsika ny famokarana POMC (proopiomelanocortin) ary noho izany mampiroborobo ny fihenan'ny lanja amin'ny alàlan'ny fahafaham-po. Ity adihevitra ity dia tohanan'ny fitsapana ara-pitsaboana voaporofo sy ny fikarohana fikarohana hafa. Na dia heverina matetika aza fa ny mpandray 5-HT2C dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny fahazotoan-komana, ny tsiranoka endocrine ary ny toe-po, ny fomba fiasa marina amin'ny fifehezana ny fahazotoan-komana dia tsy fantatra.
Fampiasana poezia HCC
Raha heverintsika ny valin'ny fandevenana Lorcaserin any, dia ity angamba no lanjany tsara indrindra eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Misy olona matavy loatra, izany hoe ireo izay manana fahasalamana mifandraika amin'ny fahasalamana na ireo izay mibebaka, dia afaka mandray soa avy amin'ity vokatra ity.
Raha ampiasaina miaraka amin'ny programa fanatontosana dokotera iray, fandaharam-pandanjana sakafo tsy dia misy kaloria, ary ny fiovan'ny fomba fiainany, dia afaka manampy olona iray hanao zavatra betsaka mihoatra noho ny tsy fahampian-tsakafo fotsiny ny mpikaroka - dia afaka manampy amin'ny fampihenana ireo loza ara-pahasalamana marobe izay mifandray amin'ny habetsahana, drà, diabeta, aretim-po, ary fahafatesana aloha.
Araka ny Foibem-pitantanana ny fitsaboana, dia ny 5 amin'ny 10 isan-jato ihany no lany amin'ny lanjan'ny vatana dia afaka manolotra tombontsoa ara-pahasalamana toy ny fahasamihafan'ny tosi-drà, ny koloroola blood, ary ny tosidra.
Ny fampiasana ny hoditra HCC
Ny olon-dehibe dia tokony haka fanafody roa isan'andro. Noho izany dia mila mitondra fanafody 60 ianao isam-bolana. Araka ny filazan'ny FDA dia tokony hampiasa ny zava-mahadomelina mandritra ny androm-piainany amin'ny fiainany izy mba hananana lanja salama.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny vokatra tsara dia tokony ho hita aorian'ny herinandro 12. Raha tsy very farafaharatsiny 5 isan-jaton'ny lanjan'ny vatanao ianao, dia voatery hampijanona ny pilina ianao. Na dia eo aza ny fampiasana azy, dia tsy dia azo inoana loatra fa hahomby ianao ary hanohana ny fahavoazana ara-pahasalamana mahomby.
Tsara ny mitadidy fa ny mpitsabo anao dia nanolotra an'io fanafody io satria nanapa-kevitra izy ireo fa ny tombony azonao dia ambony noho ny loza ateraky ny voka-dratsy. Ny ankamaroan'ny olona mihinana an'io zava-mahadomelina io dia tsy mampiseho voka-dratsy.
Alohan'ny handraisanao lorcaserin, avelao ny mpitsabo anao na ny dokoteranao hahafantatra raha tsy mahazaka an'io fanafody io ianao; na raha manana allergy hafa ianao. Ny Lorcaserin dia misy akora tsy miasa izay mety hiteraka fihetsika mahazaka na olana hafa. Angataho ny farmasinao hanome anao antsipiriany bebe kokoa.
Alohan'ny handraisana an'ity fanafody ity dia ampahafantaro ny mpivarinao na ny dokoteranao ny tantaranao momba ny fitsaboana, indrindra ny olan'ny voa, diabeta, aretin'aty, aretim-po (ao anatin'izany ny aretim-po, aretim-po, aretim-po miadana, tsy fahombiazan'ny fo) izay mety hampitombo ny risika fananganana maharary / maharitra amin'ny lehilahy (ao anatin'izany ny filahiana marefo, aretin'i Peyronie, myeloma marobe, tsy fahampian'ny sela marary, leukemia).
Ity pilina manafoana ny fahazotoan-komana ity dia mety hampihemotra ny fisainanao na hanina. Ny marijuana na ny alikaola dia mety hampitombo ny vokatr'izany. Aza mampiasa milina, mitondra fiara, na manao zavatra mitaky fahamailoana mandra-pahatanteranao tsara azy io. Fero ny zava-pisotro misy alikaola ary miresaha amin'ny dokotera raha mampiasa rongony ianao.
Raha sendra mandalo fomba fandidiana ianao, dia fahendrena ny miteny amin'ny mpitsabo nify na ny dokotera anao momba ny vokatra rehetra raisinao (ao anatin'izany ny fanafody tsy voatanisa, ny vokatra raokandro, ary ny fanafody fanafody)
Raha miaina diabeta ianao, dia mety hisy fiantraikany amin'ny siramamy ao amin'ny rào ity pilina mampihena lanja ity. Hamarino tsara fa mijery ny haavon'ny siramamy ao anaty sela matetika ianao araka ny torohevitra nomena anao ary mizara ny valiny amin'ny dokotera. Ampahafantaro ny dokoteranao raha manana soritr'aretin'ny siramamy ambany ianao. Ny mpitsabo anao dia mety mitaky ny fanitsiana ny fandaharam-panatanjahan-tena, ny sakafonao na ny diabeta.
Ity fanafody ity dia tsy tokony horaisina mandritra ny fitondrana vohoka satria mety hanimba ny zaza ao am-bohoka izany. Anontanio ny dokoteranao momba ny fampiharana ny endrika azo antoka momba ny fifehezana ny zaza teraka. Raha bevohoka ianao na bevohoka dia lazao avy hatrany ny mpitsabo anao.
Hatreto dia tsy fantatra na mitrotro ronono-nono ity fanafody ity. Mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny zazakely dia tsy tokony hatao ny mampinono rehefa mampiasa an'ity fanafody ity. Hamarino tsara fa manatona ny dokotera alohan'ny fampinonoanao ianao.
Vakio tsara ny ravina fampahalalana momba ny mpampiasa raha misy amin'ny dokoteranao alohan'ny hanombohanao mampiasa lorcaserin ary isaky ny mahazo refill ianao. Raha sendra manana fanontaniana ianao dia anontanio ny farmasinao na ny dokoteranao.
Raiso am-bava ity pilina suppressant-fiankinan-doha ity miaraka amina na tsy misy sakafo araraotin'ny torolalana apotrika anao, matetika indroa isan'andro. Ampiasao tsy tapaka ity fanafody ity mba hahazoana tombony betsaka amin'izany. Mba hanampiana anao hitadidy, makà pilina amin'ny fotoana tsy miova isan'andro isan'andro.
Ny dokotera rongony dia fanafody mahazatra. Aza mampitombo ny doka na alao ny pilao matetika kokoa noho izay voasoratra. Ny toe-javatra anananao dia mety tsy manatsara ny haingana kokoa, ary mety hitera-doza ny mety ho vokany.
Ny fifandraisana mahery vaika amin'ny zava-mahadomelina dia mety hitranga rehefa ampiasaina miaraka amin'ny pilotra lorcaserin ny fanafody manokana. Lazao amin'ny dokotera ny zava-mahadomelina rehetra ampiasainao amin'izao fotoana izao, ary ny ôrdônansy rehetra izay atomboka na ajanona ampiasaina.
Ny lozam-pangatahan'i Lorcaserin dia tsy ankatoavina ho an'ny olona tanora kokoa noho ny 18 taona.
Ahoana no tokony hizarako ny pilotra HCC?
Aza korana, na mandrava, na manoritra takelaka famoahana mivelatra. Tapaho fotsiny izy io.
Ny fitsaboana aretin-tena atao hoe Lorcaserin dia ampahany amin'ny fandaharam-pitsaboana iray manontolo izay tokony hampidirina ny fanatanjahantena, ny fanaraha-maso ny lanja, ny sakafo, ary ny fitsaboana foana ny siramamy ao amin'ny ra. Araho tsara ny fitsaboana sy ny sakafo ary ny fandaharam-potoana momba ny fampiofanana.
Arovy ny fanafody amin'ny hafanana amin'ny efitra sy ny hafanana.
Tazomy ny habetsahan'ny zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny tavoahangy rehetra. Lozam-pifamoivoizana ny lozam-pandam-barotra Lorcaserin, ary tokony ho fantatrao foana raha misy olona mampiasa ny fanafody tsy misy dokotera na tsy mety.
Aza mizara fanafody lorcaserin amin'ny olon-kafa. Arovy eo amin'ny toerana izay tsy misy olon-kafa mahazo azy.
Inona no mitranga raha toa ka tsy misy dose Lorcaserin ianao?
Tsapao avy hatrany ny doka tsy voatanisa. Tokony handefa ny dosa tsy hita ianao raha toa ka efa akaiky ny fotoana hanaovana ny dose manaraka. Aza mitondra dose fanampiny mba hahazoana doka tsy voavaly.
Inona no mitranga raha oviana ny sakaizan'i Lorcaserin?
Mitadiava fanampiana ara-pahasalamana na mifandray amin'ny andalana Poison Help amin'ny 1-800-222-1222.
Inona no tokony halaviriko rehefa mandeha amin'ny lorcaserin?
Aza mandray ny vokatra entina amin'ny lozisialy na tsia, raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera. Aza mangina koa ny fanafody kesika na ny fanafody rehefa maka ny pilotra lorcaserin.
Inona avy ireo fanafody hafa mety hisy fiantraikany amin'ny lorcaserin?
Ireto fanafody manaraka ireto dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fiasan'ny lorcaserin:
“Triptan” izay fanafody aretin'andoha migraine – toy ny Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, sy ny hafa.
erectile dysfunctiondrugs- Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil, sy ny hafa;
tryptophan (fantatra koa amin'ny hoe L-tryptophan);
kohaka na fanafody mangatsiaka misy dextromethorphan; na
fanafody hitsaboana aretin-tsaina, toe-po na aretina mitebiteby.
Ity lisitra etsy ambony ity dia tsy mahafa-po. Ny fanafody hafa dia mety hisy fiantraikany amin'ny lorcaserin, fa tsy ny fifandimbiasam-pahefana rehetra voatanisa ao anatin'ity toro-làlana fanafody ity.
BBC Reports momba ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny Lorcaserin HCL (CAS 616202-92-7)
Nisy tatitra momba ny BBC maro tao amin'ny Lorcaserin mikasika ny tsy fahampian'ny fahombiazana fa ny fiarovana ny fanafody. Araka ny voalazan'ny BBC, fandinihana vao haingana, navoaka tao amin'ny New England Journal of Medicine, dia manondro ireo olona mampiasa ny pilôtiana fanafody lozikaly izay very teo amin'ny 8.8lb (4kg) eo ho eo amin'ny fe-potoana maherin'ny telo taona sy tapany. Ny vokatr'io fanadihadiana io dia nanaporofo fa ny lorcaserin dia tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo salan-danjam-ponenana tsara indrindra.
Ny tatitra ihany koa dia milaza ny fitsaboana satria izy no miasa amin'ny fanafoanana ny fiankinan-doha, tsy mametraka ireo mpampiasa amin'ny risika goavana ny toe-piainana. Ny fanadihadiana natao nivoaka dia nanaraka marary 12,000 malemy na matavy loatra ao Etazonia nandritra ny volana 40.
Taorian'ny telo taona sy tapany dia nahatratra avo telo heny noho ny tsy nahazoan'ny olona dimy ka hatramin'ny folo isan-jaton'ny vatana ny olon-dehibe nahazo lelcaserin raha oharina amin'ireo nahazo ny toerana misy azy, araka ny filazan'ny iray tamin'ireo mpikaroka lehiben'ny fikarohana, Dr. Erin Bohula.
Ny fitsaboana natao teo amin'ny fonosana fo dia tsy nampiseho fahasamihafana goavana raha oharina amin'ny valin'ny fo nataon'ireo naka ny plasma. Raha ny fahatsiarovan-tena fa io no tena zava-dehibe indrindra amin'ny fiarovana ny pilim-pahavoazana hafa, ny lorcaserin dia mety ho ny tsara indrindra fahavoazana pill pill.
Ireo olon-dehibe mihinana fanafody dia atahorana ho voan'ny diabeta karazana 2 ihany koa. Ny pilina dia mitentina £ 155-225 ($ 220-290) isam-bolana fatra any Etazonia. Lorcaserin dia manome safidy tsara indrindra amin'ny fomba fihenan'ny lanjany toy ny fandidiana ny vavony ary ny hafa.
Ny tatitra iray hafa an'ny BBC dia nanasongadina fanadihadiana iray nataon'ny mpikaroka tao amin'ny University of Aberdeen's Rowett Institute izay nanao fikarohana momba ny fahazotoan-komana. Nilaza ny mpahay siansa fa ny fikarohana nataony momba ny fahazotoan-komana dia nahatonga azy ireo ho amin'ny faritra manokana amin'ny ati-doha.
Tsikaritr'izy ireo fa noho ny fiantraikany amin'ireo sela voafaritra amin'ny fanafody dia afaka mampidina ny tsimok'aretina izy ireo. Koa satria mpikarakara ity mpampiasa ity, ny vokatr'io fanadihadiana io dia tsy nanokatra varavarana ho an'ny fanafody vaovao tahaka ny lorcaserin fa nanamafy ihany koa ny zavatra inoan'ny manam-pahaizana momba ny lorcaserin-ny fiarovana sy ny fahombiazany.
Powder asidra flumethasone (28416-82-2)